Nayakhabar.com: कपाल धेरै झर्छ ? तत्काल रोक्न अपनाउनुहोस यी तीन उपाय
काठमाडौं । हल्काफुल्का कपाल झर्नु सामान्य कुरा हो । आयु पुरा भएका कपाल भर्नु र नयाँ पलाउनु एक प्रकृतिक प्रक्रिया हो । तर सामान्य भन्दा बढी कपाल झर्नु , कपाल समातेर तान्दा हातमा मुठै कपाल आउनु, राति सुतेर भोलिपल्ट बिहान हेर्दा शिरानीभर कपाल झर्नु सामान्य प्रक्रिया होइन ।
यसरी कपाल झरे के गर्ने ? अपनाउनुहोस यी तीन उपाए ।
१) कपाल अस्वभाविक रुपमा झरिरहेको छ भने हेलचेक्रयाइँ गर्नु हुँदैन कपाल अस्वाभाविक रूपमा झरिरहेको छ भने हेलचेक्रयाइँ गर्नु हुँदैन । तपाई कपाल अत्याधि झरेकोमा चिन्तित हुनुहुन्छ र कपाल जोगाउन चाहनुहुन्छ भने सबैभन्दा पहिले लामो कपाललाई छोटो बनाइहाल्नुहोस् । लामो कपाल धेरै झर्ने सम्भावना हुन्छ । लामो कपालको ‘वेट’ धेरै हुने भएकाले छिटो झर्न सक्छ । कपाल छोटो बनाएपछि केही हदसम्म झर्न कम हुन्छ ।
२) कपाल छोटो बनाइसकेपछि ‘मिल्ड’ स्याम्पु प्रयोग गरेर कपाल झर्ने प्रक्रिया रोक्न सक्नुहुन्छ । अरू केमिकलयुक्त कुनै पनि स्याम्पु प्रयोग गरिरहनुभएको छ भने तुरुन्त बन्द गर्नुहोस् । मिल्ड स्याम्पु बजारमा पाइन्छ । यो केमिकललेस स्याम्पु हो । कपाल झर्न नदिन यो आफैँले गर्न सक्ने उपचार हो ।
३) कपाल झर्ने विभिन्न कारण हुन सक्छन् । शरीरमा लागेको रोग, खानपिनलगायतले कपालमा असर गरेको हो भने नयाँ उपचार प्रक्रियामा जानुपर्छ । यसका लागि सबैभन्दा पहिले त कपाल झर्नुको कारण पत्ता लगाउनु जरुरी हुन्छ । अन्य रोगका कारण कपालमा असर परेको हो भने पहिले रोगकै उपचार गर्नुपर्छ ।